जब तपाईं GoDaddy बाट डोमेन खरीद गर्नुहुन्छ? तपाईं यसको स्वामित्व राख्नुहुन्छ - Complete Guide
जब तपाईं GoDaddy बाट डोमेन खरीद गर्नुहुन्छ? तपाईं यसको स्वामित्व राख्नुहुन्छ
तपाईं GoDaddy वा अन्य सेवा प्रदायकहरूबाट एक डोमेन नाम किन्नुहुन्न भन्ने कुराको फरक पर्दैन, तपाईं स्थायी रूपमा यसको स्वामित्व लिन सक्नुहुन्न. टेक्निकल कोही यसको लागि योग्य हुन सक्दैन. विशेष कार्यकाल पछि तपाईको डोमेन राख्न तपाईले भुक्तानी गर्नुपर्छ.
तपाईं अधिक डोमेन नाम राख्न सक्नुहुन्छ 10 बर्ष, त्यस पछि तपाईले यसलाई नविकरण गर्नु पर्छ. यसलाई अधिक स्पष्ट पार्दै, एक डोमेन खरीद बराबर छ र भवन भाँडा लिन र भुक्तानी गर्न. तपाईसँग भवनको स्वामित्व छैन तर तपाईले यसलाई प्रयोग गर्न मासिक खर्च तिर्नु पर्छ.
अर्को कुरा यो छ कि बहुमत प्रयोगकर्ताहरूले एक डोमेन नाम न्यूनतम खरीद गर्दछ2अधिकतम गर्न वर्ष5बर्ष. तेस पछि, तिनीहरू अर्को नविकरणका लागि जान्छन्. म सधैं पछि नवीकरण गर्छु2बर्ष. यदि तपाईं डोमेन हराउनको लागि बढी जोखिममा हुनुहुन्छ, तपाईं स्वत: बिलिंग सक्रिय GoDaddy सेटिंग्स, यो स्वचालित रूपमा तपाईंलाई शुल्क लगाउँदछ जब तपाईंको डोमेनको म्याद सकिन लागेको छ।
प्याकेजको साथ डोमेन खरीद गर्दै
यदि तपाईं डोमेन नाम किन्नको लागि नयाँ प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि तपाईले होस्टिंग प्याकेजमा नि: शुल्क डोमेन नाम खरीद गर्न विचार गर्नुपर्छ. यसले तपाईंलाई अतिरिक्त भुक्तान गर्नबाट बचाउँछ. कुनै श .्का छैन, जब तपाईं पहिलो पटक खरीदको लागि जानुहुन्छ, तपाईं अधिक शुल्क तिर्न महसुस गर्न सक्नुहुन्छ. त्यसैले यो छ? म मेरो आफ्नै अनुभव साझा गर्दैछु र विकल्पको बारेमा सावधान हुन सुझाव दिन्छु.
उदाहरण को लागी–जब तपाईं जानुहुन्छ Bluehost को साथ खरीद गर्नुहोस् GoDaddy को समान प्रतिष्ठा छ जो कम्पनी. तिनिहरूले तपाइँलाई नि: शुल्क डोमेन नाम मात्र प्रदान गर्दैन, SSL सेवा पनि त्यहि मूल्यमा बढि सुविधाहरुको साथ तपाइँले GoDaddy बाट प्राप्त गरिरहनु भएको छ।. तपाईलाई पनि थाँहा छ, सुविधाहरु मध्ये एक– SSL प्रमाणपत्र आजकल आवश्यक भएको छ. यो क्रमबद्ध कारक मानिन्छ. तलको स्क्रीनशट हेर्नुहोस्.
यस्का साथसाथै, तपाईंले यो निश्चित गर्नुपर्दछ कि डोमेन नाम अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्यको लागि .com हुनुपर्दछ र यो देश विशिष्ट डोमेन हुन सक्छ जस्तै यदि तपाईं भारतलाई लक्षित गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईंले लिनु पर्छ।, अष्ट्रेलिया को लागी तपाईले .com.au किन्नु पर्छ, यस्तै युके को लागी .co.uk किन्न चाँडो रैंकिंगको लागि राम्रो छ.
यहाँ तपाईंको लागि अझ राम्रो कुरा हो, यदि तपाइँ क्रिसमस जस्ता उत्सव दिनको नजिक हुनुहुन्छ, कालो शुक्रबार. यसले तपाईलाई बढि मद्दत गर्दछ. डोमेनको मूल्य वर्षको फरक समयमा फरक हुन्छ. उदाहरण को लागी– कालो शुक्रवार को दिन, तपाईं सजिलैसँग यसको लाभ लिन सक्नुहुन्छ 70% बन्द. जबकि नियमित दिनहरू, तिनीहरूले तपाईंलाई भेरिएबल मूल्य दरहरूको साथ चार्ज गर्दछन्.
यो बाहेक, धेरै प्रयोगकर्ता वा newbies GoDaddy को मूल्य तुलना तुलनात्मक रूपमा उच्च पाउन. जबकि अन्य होस्टिंग कम्पनीहरूले समान मूल्यमा धेरै सुविधाहरू प्रदान गर्दछ. अरूहरू GoDaddy बाट डोमेन किन्न र अर्कोबाट होस्टिंग सेवा मन पराउँछन्.
निष्कर्ष GoDaddy बाट एक डोमेन किन्नुहोस् र यसको स्वामित्व लिनुहोस्: Godaddy बाट मात्र डोमेनहरू होइन तर अन्य समान सेवा प्रदायकहरूले तपाईंलाई कुनै खास डोमेनमा स्थायी स्वामित्व प्रदान गर्दछन्. तर तपाई अधिकतममा दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ 10 बर्ष. तेस पछि, तपाईंले यसलाई नविकरण गर्नु पर्छ. ब्लगरहरू वा वेबसाइट मालिकहरूले यति लामो समय सम्म रेजिस्टर डोमेनबाट रोक्छन्. यो वास्तवमै धेरै खर्च भयो. एक पटकको समयमा, तिनीहरूले अधिकतम को लागि नवीकरण5बर्ष.
तपाइँ एक WordPress ब्लगबाट कति पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ?
Previous Postके मैले मेरो होस्टबाट SSL किन्नु पर्छ??
Next Postकसरी डोमेन नाम खरीद गरेपछि वेबसाइट निर्माण गर्ने?
यदि म GoDaddy बाट एक डोमेन खरीद गर्दछु, के मैले उनीहरूसँग होस्ट गर्नु पर्छ??
के मैले मेरो होस्टबाट SSL किन्नु पर्छ??
के तपाई डोमेन खरीद नगरी वेबसाइट बनाउन सक्नुहुन्छ?